Elona Cebiso liSebenzayo kwiQhinga loPhuculo lweMillenial Content Strategies | Martech Zone
Lihlabathi leevidiyo zekati, ukuthengisa ngentsholongwane, kunye nento enkulu elandelayo. Ngawo onke amaqonga akwi-intanethi ukufikelela kubathengi abanokubakho, owona mceli mngeni mkhulu yindlela yokwenza yenza imveliso yakho ifaneleke kwaye inqweneleke kwintengiso ekujoliswe kuyo.
Ukuba intengiso yakho ekujolise kuyo yiminyaka eliwaka emva koko unokufumana umsebenzi onzima ngakumbi wokubonelela ngezidingo zesizukulwana esichitha iiyure ngosuku kwimidiya yoluntu kwaye singaxutywanga ziindlela zokuthengisa zemveli.
Isizukulwana esazi kakuhle ukuba bafuna ntoni kwaye esingazinzisi nantoni na engaphantsi sisisihle… sisihlwele esinzima. Ngaphandle koku, ayinakwenzeka yenza iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa ezijolise kumawakawaka eminyaka, ifuna nje indlela entsha yokunxibelelana nabo.
Ukuba uzama ukufikelela kwizigidi zeminyaka kukho izinto ezimbalwa onokuthi uziphephe ukuba ufuna ukuba nephulo lokuthengisa eliyimpumelelo:
Umxholo osekwe ngokuBhaliweyo
Izibhengezo kwiTV nakumaPhephandaba
Ezi zinto zihlala ziguqula i-millennials kude kwinkampani okanye kwimveliso. Abathandi ukuxelelwa ukuba bathenge ntoni ngendlela efanayo nezizukulwana ezidlulileyo eziphendule kakuhle kubukhazikhazi kunye nobuhle besibhengezo esibekwe kakuhle kunye nentengiso ebonakalayo.
Izinto ezintathu zibalulekile ekwenzeni isicwangciso esisebenzayo sokuthengisa semillennials. Kufuneke u: Zibandakanye, Zonwabise, kwaye ufundise.
Iiwebhsayithi zemidiya yoluntu ezinje nge-Instagram, i-Snapchat, i-Twitter, kunye ne-Youtube zisetyenziswa ngamaqonga afanelekileyo okuthumela kunye nokukhuthaza umxholo obonakalayo omangalisayo, okwabelwana ngawo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, unokuphindeka.
Kungekudala, I-Honda yenze iphulo lokuthengisa eliyimpumelelo elijolise kwi-millennials Ngokusebenzisa iifilitha ze-Instagram kunye noluhlu lwee-SnapChats ekwabelwana ngazo njengomlilo wasendle. Indlela yabo yabavumela ukuba benze umxholo onokwabelana kunye nokwabelana ngendlela yanamhlanje kunye noluntu ngaphandle kokunyanzela ukuthengisa.
UWendy ugcina iakhawunti esebenzayo ye-Twitter ephendula rhoqo imibuzo yabathengi ngayo ihlakaniphile, ibukhali kwaye ihlekisile. Olu hlobo "lokunyathelwa" lilitye lembombo lenkcubeko yangoku yeminyaka kunye nokubandakanya isiseko ekujolise kuso semileniyali ngale ndlela yeyona ndlela ukubheja kwakho kukucofa kule ndawo ifunwa kakhulu emva kwesiseko sabathengi.
Enye yezinto eziphambili ekudaleni iindlela ezifanelekileyo neziphumelelayo zokuthengisaOko kujolise kuko kumawaka eminyaka kukuzibandakanya ngokubonakalayo kumaqonga eendaba ezentlalo abathanda ukuwasebenzisa. Ngokwenza oku uthatha inyathelo lokuqala lokukhulisa isiseko sabathengi bakho kunye nokudibana neenjongo zakho zokusebenza kunye noqikelelo lwenzuzo.
Iividiyo ziye zaba yindawo yokuthengisa kunye neenkampani Chitha izigidi zeedola ngonyaka kwintengiso yevidiyo kwiiwebhusayithi nakumaqonga eendaba ezentlalo. Kodwa imigangatho yakho yile-yile-yile nto-siyiyo-kwaye-yile-sizinto esithengisa ngayo yentengiso yevidiyo ayizukuyenza nantoni na ukonwabisa isiseko sabathengi seminyaka eliwaka.
Iividiyo zentsholongwane zi icandelo elikhulu lokuthengisa kunye nokwenza ividiyo eba yinto enkulu elandelayo yeyona ndlela ilungileyo yokonwabisa kunye nokutsala isiseko sabathengi bakho seminyaka eliwaka. Ngaphezulu kweeyure ezi-4 ngosuku ezichithwe kwiifowuni zabo, kukhuselekile ukuthi i-millennials iyayithanda ividiyo elungileyo. Iikati, iyasilela, isutires, ukudityaniswa kwamabali eendaba, ukufunda kakubi imilebe, ungayibiza ngegama lokuba bayibukele.
Iinkampani ezininzi ezinje ngeOld Spice kunye neGoDaddy zaziwa ngaphezulu kweentengiso eziphezulu zevidiyo ezihlala zibulelwa yintsholongwane ngenxa yokuqaqadeka, isini, ukuhlekisa, kwaye ngamanye amaxesha ezantsi-ekunene-okwenyani-okwenyani-okwenyani.
Kwaye ayizizo iividiyo nje kwakhona!
Kwaye ngelixa ividiyo emfutshane ehlekisayo is indlela entle yokubandakanya ababukeli bakho ekujoliswe kubo, inyani kukuba ayisiyiyo kuphela kwendlela. Ukonwabisa abaphulaphuli bakho beminyaka eliwaka kungafezekiswa ngamanqaku amafutshane abambekayo ahambelana neenkolelo zabo, imiba yezentlalo kunye neengxelo zehlabathi lokwenyani. Abantu abaninzi, kubandakanya millennials khetha amabali amafutshane kwaye abandakanyekayo abanyanzela ukuba bafunde yonke loo nto. Ukuba awunakho ukwenza umxholo wokubhala oyifunayo kufuneka ubambe kwaye ubonwabise abaphulaphuli ojolise kubo, unokucinga ngokufuna ababhali abazimeleyo kumaqonga anje Upwork okanye uqeshe ababhali kwiinkonzo ezinje Isincoko.
Iifilitha, iimemes. I-boomerangs, izitikha, iklikhbait, kunye nemidlalo eshukumayo zonke ziye zaba ziindlela ezifanelekileyo zokujolisa kubaphulaphuli abangakhuselekanga kubuchule obuqhelekileyo bokuthengisa. Ezi ntlobo zongeziweyo zeakhawunti yokonwabisa yezigidi zezinto ozithandayo kunye nezabelo ezithi ngokunyanisekileyo zikhuthaze imveliso yakho ngaphandle kokuyinyanzela ukuba ibe phantsi komqala wabathengi.
Nangona kunjalo uthatha isigqibo sokonwabisa isiseko sakho somthengi sewaka leminyaka ngesicwangciso sakho sentengiso, qiniseka nje ukuba ulandela ezi zikhokelo zilula:
Ukufundisa iwaka leminyaka kwizibonelelo zemveliso lelona candelo lokugqibela ekufuneka liqwalaselwe xa kusenziwa iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa zemillennials. Okukhona iwaka leminyaka lisazi malunga nenkampani yakho kunye nemveliso- ukusuka kwindlela eyenziweyo ukuya apho inzuzo iya khona-kokukhona kunokwenzeka ukuba benze isigqibo sokuthenga kuwe.
Cinga ngokuphuhlisa iindlela zokuthengisa, ukongeza kwezinye iinjongo zakho, fundisa isiseko sakho ekujolise kuso sewaka leminyaka malunga nezibonelelo kulondolozo lwendalo, amalungelo oluntu, okanye umsebenzi wesisa ezithi iinzuzo ezivela kwimveliso ziye ngqo ekuncedeni. Ngale ndlela, iwaka leminyaka livakalelwa ngamandla okuthenga ngaphandle kwetyala lokusebenzisa.
Inkampani yempahla ePatagonia isandula ukunikela Inzuzo yonke yosuku yokuThengiswa kwabo abaMnyama ngoLwesihlanu Ukunceda. Ukuthengisa kwabo kwakuphahla kunye necebo labo lokuthengisa lixhomekeke kakhulu kwizigidi zeminyaka ezinxibelelana nesizathu kunye nokwabelana ngolwazi kunye nabahlobo kunye nabalandeli.
Nokuba umngeni we-ALS Ice Bucket wacelomngeni iphulo lokuthengisa eliyimpumelelo imfundo exubeneyo nomnikelo wesisa ngendlela emnandi nenomdla ekwakulula ukuyila kwaye yanika ithuba lodumo lwe-intanethi. Ekugqibeleni, umbutho uphakamise ngaphezulu kwe- $ 115M kwiminikelo.
Ezinye iinkampani zilandele amaqhinga afanayo okuthengisa kunye nokwenza intengiso ngokwenza amawaka ezigidi azi ngomsebenzi wabo wesisa, bezilungelelanisa namaphulo okuthengisa aqhubela phambili kubantu besini esinye kunye nakwizibini ezitshatileyo, kwaye bade bakhuthaze imigaqo-nkqubo yabo yokuqesha kunye nokwenza kwabo ukwazisa abathengi malunga nokhuphiswano kunye nemivuzo enokuphila. kunye nezibonelelo ezihlawulwa kubo bonke abasebenzi babo.
Ukubandakanya imfundo kwisicwangciso sakho sentengiso ngu ibalulekile ukufikelela kwiinkulungwane zeminyaka. Okukhona ukwazi ukunxibelelana nemiba eyahlukeneyo yemveliso okanye inkampani, kokukhona kulula ukwenza ukuthembeka kwexesha elide kunye nokuqhubeka uthengisa iimveliso kubo ngokufanelekileyo.
Ungayenza njani ukuba isebenze!
Ngelixa ukubeka umgaqo wendlela kwiphulo lokuthengisa eliyimpumelelo elijolise kwi-millennials kulula, inkqubo yokwenziwa kwayo iya kufuna umsebenzi omninzi njengoko yonke imveliso, uphawu kunye nenkampani yahlukile.
Qala ngokwenza uphando ngeendlela eziphumeleleyo (kwaye ezingaphumelelanga) zokuthengisa ezisetyenziswe zezinye iinkampani. Funda kwindlela abayenze ngayo, ziziphi izixhobo abazisebenzisileyo, kwaye babenakho njani bazibandakanye, bonwabise, kwaye bafundise isiseko sabathengi seminyaka eliwaka.
Eyona meko imbi kakhulu, qesha i-millennial okanye emibini ukuze ikunike ukuqonda okudingayo kwelona lelona lizwe lifunwa kakhulu lifuna kwaye lingafuni.
tags: Iifayilememe. boomerangimvelaphiizitifiketi